ဆာလာကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမား ၅ ဦးထဲက တစ်ဦးလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ်နည်းပြ အမ်မရီ | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ဆာလာကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမား ၅ ဦးထဲက တစ်ဦးလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ်နည်းပြ အမ်မရီ
အာဆင်နယ်နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီက သူ့အနေနဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကို ကိုင်တွယ်စဉ်တုန်းက မိုဟာမက် ဆာလာကို မခေါ်ယူဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင် အီဂျစ်တိုက်စစ်မှူးဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမား ၅ ဦးထဲက တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဂန်းနားတို့ရဲ့ နည်းပြဟာ ဒီရာသီရှုံးပွဲမရှိ ပရီးမီးယားလိဂ်ဇယားကို ဦးဆောင်နေသူ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ ဆာလာတို့ကို စနေနေ့မှာ အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆာလာဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နွေရာသီက အီတလီကလပ် ရိုမားအသင်းမှ ပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက်ပိုင်း အသက် ၂၆ နှစ်ရှိ အီဂျစ်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟာ ၇၈ ပွဲကစား ၅၉ ဂိုးထိ သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
အမ်မရီဟာ လီဂူ-၁ ချန်ပီယံ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကို နည်းပြခဲ့တုန်းက ဆာလာအနေနဲ့ ကလပ်အသင်းကြီးတစ်သင်းအတွက် ဖိအားတွေနဲ့ ခြေစွမ်းပြ ကစားနိုင်မလားဆိုတာကို အဲဒီအချိန်က မရေမရာဖြစ်ခဲ့မိတယ်လို့ သူက သောကြာနေ့က ဝန်ခံသွားပါတယ်။
“ရိုးမားအသင်းမှာ ဆာလာ ကစားနေတုန်းက သူ့ကို ပီအက်စ်ဂျီက ခေါ်ယူဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းအရာတွေ ကျနော် အသင်းနဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။”လို့ အမ်မရီက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့မှာ သံသယအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သူဟာ လီဗာပူးလ်နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ဒီသံသယတွေကို သူက လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ချိုးဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ကမ္ဘာပေါ်က ထိပ်တန်းကစားသမား ၅ ဦး အကြောင်း ပြောနေတဲ့အခါ အဲဒီထဲက တစ်ဦးဟာ ဆာလာဖြစ်ပါတယ်။”
ဆာလာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်အရာတွေ သံသယရှိခဲ့သလဲဆိုတာကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ အမ်မရီက “ဆာလာအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အသင်းကြီးတစ်သင်းဆီ ယူဆောင်နိုင်မှာလား? ဥပမာအားဖြင့် ပဲရစ်က ပီအက်စ်ဂျီအသင်းလိုပေါ့။ ကနေ့မှာတော့ ကျနော် ခင်ဗျားတို့ကို ပြောနိုင်တာက …. ကျနော်တို့ သူ့ကို ခေါ်ယူခဲ့မယ်ဆို ကျနော်တို့ဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမား ၅ ဦးထဲက တစ်ဦးကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ပြောမှာပါ။”လို့ ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမ်မရီက ဆာလာနဲ့ ဗဟိုနောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက်တို့ ခေါ်ယူနိုင်ခြင်းက ယာဂန်ကလော့ရဲ့ လက်အောက်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်း တိုးတက်မှုရဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်တုန်းက ခံစစ်ပိုင်းပြဿနာတစ်ရပ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးတာကို ကျနော် မှတ်မိသေးပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ကစားသမားအချို့ ဝယ်ယူခဲ့တယ်။ ဥပမာ ဗန်ဒိုက်ပေါ့။ ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အတူ ရလဒ်အနေနဲ့ ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ တိုးတက်မှုကို ကြည့်နေရပါတယ်။”လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“သူတို့ဟာ ခံစစ်ပိုင်းမှာ အရမ်းကို တောင့်တင်းပြီး ဆာလာကို ခေါ်ယူလိုက်ချိန်မှာလည်း သူတို့ဟာ အများကြီး တိုးတက်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင် တိုက်စစ်ပိုင်းအရ သူတို့တစ်တွေဟာ အရမ်းကို ကြီးမားတဲ့ အသင်းပါပဲ။”
စပိန်လူမျိုးနည်းပြက “ကျနော့်အမြင်ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ အခုဆိုရင် အကောင်းဆုံးနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အရေးပါဆုံး ပြိုင်ပွဲဖြစ်နေပါပြီ။ စပိန်အသင်းတွေနဲ့အတူပေါ့။ အီတလီနဲ့ ဂျာမနီတို့ဆီက အသင်းအချို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အထင် ဒီမှာက အကောင်းဆုံးအသင်းတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေ ရှိကြပြီး အခုဆိုရင် အမှတ်ပေးဇယား ဦးဆောင်နေသူဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့ဟာ အရမ်းကောင်းအောင် လုပ်ပြနေလို့ပါ။”
ပြင်သစ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ယူရို ၁ သိန်း လှ...
Mohamed SalahSalahUnai EmeryPSGLiverpoolArsenal